Marwadzo - Sorrento Therapeutics
Marwadzo akabatana neArthritis yeKnee
Marwadzo anoenderana nechirwere chegomarara
RTX (resiniferatoxin) yakasarudzika neural intervention molecule inosarudzika uye inogona kuiswa parutivi (semuenzaniso, nerve block, intra-articular) kana nechepakati (semuenzaniso, epidural), kudzora kurwadziwa kusingaperi mumamiriro mazhinji anosanganisira arthritis negomarara.
RTX ine mukana wekuve wekutanga-mu-kirasi zvinodhaka zvinogadzirisa zvino marwadzo asingagoneki mune imwe nzira uye yakasarudzika nzira, nekunanga tsinga dzinokonzeresa kusingaperi kuperevedza kwemarwadzo chiratidzo kutapurirana.
RTX inosunga zvakasimba kune TRPV1 receptors uye mauto akavhura nzira dze calcium dziri mumagumo-terminal yetsinga kana soma ye neuron (zvichienderana nenzira yekutonga). Izvi zvinogadzira kunonoka uye kwakasimba cation influx iyo inokurumidza kutungamirira kukudzimwa kweTRPV1-positive masero.
RTX inopindirana zvakananga neafferent nerve cell pasina kukanganisa manzwiro akadai sekubata, kumanikidza, kurwadziwa kwakanyanya, kuzununguka kana mhasuru kurongeka basa.
Kudzora pamucheto wetsinga inoguma inoguma mune inotsigirwa yenguva mhedzisiro yekurapa marwadzo anoenderana nawo arthritis yebvi.
RTX inogona kubatsira varwere vane kupera kwegomarara kurwadziwa, mushure mejekiseni rimwe chete repidural, nekuvhara zvachose kutapurirwa kwechiratidzo chemarwadzo kubva kune tumor tissue kusvika kune dorsal root ganglion (DRG) mumuzongoza, pasina migumisiro isingadikanwi inobatanidza nepamusoro uye inodzokororwa maopioid. Kana maopioid achiramba ari chikamu chezvombo zvekurapa kwevarwere ava, RTX ine mukana wekudzikisa zvakanyanya kuwanda uye kuwanda kwekushandiswa kweopioid.
RTX yakapihwa Orphan Drug Status neUS Food and Drug Administration yekurapa zvirwere zvekupedzisira, kusanganisira kurwadziwa kwegomarara.
Sorrento yakabudirira kupedza chirongwa chakanaka chePhase Ib chekliniki yechiratidzo chekuedza kwepfungwa neNational Institutes of Health pasi peCooperative Research and Development Agreement (CRADA) iyo yakaratidza marwadzo ekuvandudza uye kuderedza kushandiswa kweopioid mushure mekutonga kwe intrathecal (zvakananga mumusana wepelinha nzvimbo).
Kambani iyi yakatanga zvidzidzo zvakakosha uye iri kutarisira kunyorwa kweNDA muna 2024.